काेराेना जित्ने सुत्र : बलियाे मन, व्यायाम र आयुर्वेद – Health Post Nepal
काेराेना जित्ने सुत्र : बलियाे मन, व्यायाम र आयुर्वेद
२०७७ भदौ २० गते १८:३७
डा. सुनिलमणि पोखरेल भरतपुर अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति विभाग प्रमुख हुन्। उनी भरतपुर अस्पतालमा फ्रन्टलाइनमा रहेर नै काम गर्छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा पनि उनी बिरामीको उपचारमा सक्रिय थिए।
काठमाडौंको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालपछि सबैभन्दा धेरै भरतपुर अस्पतालमा दैनिक ४० हाराहारीमा प्रसूति गराइन्छ।
बिरामीको चाप मध्यनजर गर्दै पोखरेल बिरामीको उपचारमा अग्रसर नै भइरहे। तर, चितवनमै प्रसूति रोगको उपचारमा नाम चलेका डा. पोखरेललाई साउन अन्तिममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो।
जोखिम मोलेरै सयौं बिरामीको उपचारमा खट्दा उनलाई संक्रमण भएको थियो। उनीसँगै उनका ९ वर्षे छोरालाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
२० दिनको आइसोलेसन बसाइपछि उनी कोराना संक्रमण जितेर शुक्रबार घर फर्किएका छन्।
आफू उच्च मनोबलसाथ छिट्टै काममा फर्किने र बिरामीको सेवामा जुट्ने तयारीमा छन् उनी। आइसोलेसनमा बस्दाको अनुभव र कोरोना भाइरस संक्रमणका विषयमा डा. पोेखरेलसँग हेल्थपोस्टकर्मी वसन्त ढुंगानाले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
झन्डै २१ दिनपछि कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्किनुभएको छ। कोरोना जितेर घर फर्किंदा कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
कोरोना पनि एक प्रकारको रोग नै हो। अहिले यसले सामाजिक त्रास फैलिएको छ। योदेखि अलिअलि डर त लागेको थियो। जितेर आएपछि म निकै खुसी छु। परिवार खुसी छन्। मैले नियमित हेर्ने बिरामीहरू पनि खुसी हुनुभएको होला। म फेरि बिरामीको सेवामा आउन पाउने भएँ। म एकदम खुसी छु।
कोरोना परीक्षण आफूलाई शंका लागेर गर्नुभयो कि लक्षण देखिएर?
मेरो कोरोना परीक्षण लक्षण देखिएर गरेको हो। म चाहिँ अलिकति व्यस्त मान्छे। भरतपुर अस्पताल र भरतपुर सामुदायिक अस्पताल अलि बढी बिरामी हेर्नुपर्थ्यो ।
त्यसमाथि गर्भवती महिलाको उपचार गर्दा संक्रमण हुने डर हुन्छ। त्यही क्रममा सामान्य अवस्थाको घाँटी दुखाइ, उच्च ज्वरो र रूघाले सताएपछि परीक्षण गरें। कोरोना शंका लागेर स्वाब दिएपछि घरमा नै बसें। केही दिनमा पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि चितवन मेडिकल कलेजको आइसोलेसनमा बसें।
कसरी संक्रमण भयो भन्ने याद छ त तपाईंलाई ?
ठ्याक्कै यसरी भयो भन्ने याद छैन। तर, बिरामीको उपचार गर्दागर्दै बिरामीबाट नै सरेको हुनुपर्छ। किनकि म त्यसरी भीडभाड हुने ठाउँमा गएको पनि थिइनँ। बिरामीको चाप बढी हुँदा उहाँहरूबाट नै सरेको हुनुपर्छ।
कोरोना संक्रमण भएपछि चितवनमा चिकित्सकलाई नै सामाजिक दुव्र्यवहारको घटना भयो। तपार्इंलाई संक्रमित भएपछि समाज र घरपरिवारबाट कतिको सहयोग मिल्यो?
घरपरिवारबाट त मलाई पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्यो। मेरो श्रीमती नै डाक्टर हुनुहुन्छ। यसमा पूर्ण सहयोग हुने नै भयो। चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले मेरो उपचार गर्नुभयो। उहाँहरूको व्यवहार पनि एकदमै राम्रो पाएँ।
अस्पतालमा बसेको हुनाले समाजबाट त्यस्तो नराम्रो अनुभव भएन मलाई। अहिले निको भएर घर फर्किएको छु। सामान्य नै छ। तर, आइसोलेसनमा बसेर मिडियाहरू हेर्दा मनोवैज्ञानिक त्रासचाहिँ भएको थियो। हाम्रो समाजले कोरोनाका विषयमा अरूलाई घृणा गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा अलि नबुझेको पाएको छु।
भ्रमित समाचारले संक्रमितलाई कस्तो असर पार्दो रहेछ?
नेगेटिभ समाचारले अलिकति चिन्ता बढाउने रहेछ। मैले पनि एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। यति जनाको मृत्यु भयो, यति कोरोना संक्रमित भए, यो टोल सिल गरियो।
जिल्ला नै सिल भन्ने समाचारले मनोवैज्ञानिक असर गर्ने रहेछ। त्यसैलाई यति जना संक्रमित निको भए भन्ने जस्ता सकारात्मक समाचार दिने हो भने अलि डर हट्छ। पोजेटिभ कुरा गरेर नकारात्मक कुरा दिन परे अन्तिममा दिँदा पनि हुन्छ।
हेडलाइन नै तरंगित पार्ने खालका हुन्छन्। प्रत्येक समाज, मिडिया वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई आत्मबल बढाउने खालका कुराहरू गर्न आवश्यक छ।
अझै पनि कोरोना भन्नेबित्तिकै आत्तिने गरेको पाइन्छ। खासमा के गर्नुपर्छ, तपाईको सुझाव?
सवैभन्दा पहिले त अहिले कोरोना केही पनि होइन भन्ने समेत लागिएको छ। यसलाई सामान्य रूपमा हेर्न पनि हुँदैन। कोरोना लागेपछि ७ प्रतिशत जोखिम अवस्थामा हुन्छन्। उनीहरूलाई आइसियूसमेत आवश्यक पर्छ र प्रायः धेरै मानिसलाई सन्चो हुन्छ।
कतिलाई लक्षणसमेत देखिएको छैन। दीर्घरोगी भएका र शक्ति कम भएका मान्छेलाई जोखिम बढी हुन्छ। त्यसकारण भीडभाडमा कम जाने, मास्क अनिवार्य लगाउने, चिकित्सकहरूको सल्लाह मान्ने गर्नुपर्छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खालका शक्तिवर्द्धक खानेकुरामा जोड दिँदा राम्रो हुन्छ।
तपाईंको आइसोलेसनमा बस्दाको अनुभव चाँहि कस्तो रह्योे?
म अस्पतालकै आइसोलेसनमा बसेको हुँ। सुरुको एक हप्ता मलाई असहज महसुस भयो। रूघाखोकी, ज्वरो आएको थियो। आफू चिकित्सक भए पनि अलिकति मन त डराउँदो रहेछ। मलाई भोलि केही भइहाल्छ कि! अक्सिजन दिनुपर्ने त होइन भन्ने कुराहरू मनमा धेरै खेले। पछि विस्तारै स्वास्थ्य पनि ठीक हुँदै गयो। पछि भिडियो र फोनमार्फत बिरामीहरूलाई सुझाव दिने काम गरें।
यो समयमा साथीभाइको धेरै माया पाएँ। देश विदेशबाट धेरैले फोन गर्नुभयो। कयौं बिरामीले फोन गर्नुभयो। उहाँहरूको मायाले नै निको भएर फर्किएको छु। अब बिरामीको उपचारमा अझ बढी सक्रिय हुन्छु।
तपाइँले भनिहाल्नुभयो, अझ बिरामीको उपचारमा सक्रिय हुन्छु भनेर। भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाहरू आउने गर्दछन्। उनीहरूको छुट्टै व्यवस्थापनसहित उपचार कसरी गर्ने योजना छ?
भरतपुर अस्पतालले भर्खर मात्र कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलालाई छुट्टै उपचार गर्ने गरी आइसोलेसन पनि तयार गरेको छ। अहिले अस्पतालका अध्यक्ष र मेसुसँग पनि कुरा भइरहेको छ। मेसु पनि कोरोना जितेर फर्किनुभएको छ।
तत्कालका लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने गर्भवतीका लागि पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गर्न भनेका छौं। शंका लागेकालाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरेका छौं। सकेसम्म कोरोनाको सुरक्षा अपनाउने कोसिस हाम्रो छ।
कोरोना जित्न चाहिँ के आवश्यक रहेछ?
सबैभन्दा पहिले त आत्मबल बलियो हुनुपर्‌यो। पोषिला खानेकुरा खानुपर्‌यो। आयुर्वेदिक औषधीहरू मैले पनि सेवन गरें। गुर्जोको रस, बेसारपानी, तातोपानी, फलफूल प्रशस्त खाएँ। साथै, व्यायाम पनि गरें।
कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराइरहेका, आइसोलेसन रहेका बिरामीलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ?
सर्वप्रथम त आत्मबल बढाएर राख्नुस्। ९५ प्रतिशत आफैं ठीक हुन्छ। यो सामान्य रूघाखोकी नै हो। तर, कसै कसैलाई समस्यामा पार्छ। त्यस्तो हुँदा अस्पतालमा जानुपर्छ। आइसियू मात्र भयो भने पनि धेरै मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ।
आत्मबल बढाउनु नै राम्रो हो। तर, कोरोना केही पनि होइन भन्दै मिडियामा आएको छ। त्यसो पनि होइन। कसै कसैलाई सिकिस्त पनि बनाउँछ। दीर्घरोगीहरूको त ज्यानसमेत गइरहेको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामी सबै सचेत हुनु आवश्यक छ।
डा. सुनिलमण पोखरेल